My Dear Diary » အတ္တဘေး	10
ဇီဇီခင်ဇော် says: သဘာဝဘေးရဲ့နောက်က ဘေး ပေါ့နော်။
Mike says: .ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဖြင့် အတော်ယုတ်မာသူတွေလို့ပြောလို့ရတယ်.
အောင် မိုးသူ says: ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရော ဆိုတဲ့ စကားပုံက အလကားပေါ်လာတာမှ မဟုတ်တာ
Alinsett @ Maung Thura says: ရပ်ကွက်ထဲက ကုန်စုံဆိုင်လေးတွေမှာ…ဟင်းခပ်ဆား – အရင်က တစ်ရာတန်အထုပ်ဟာ
Foolish Girl says: http://funny.com.mm/fun/26055?ref=next
ဒီLink မှာပါတဲ့ ဟန်ဆိုတဲ့ ကားတိုလေးက တော်တော်ကောင်းတယ် ခုတင်ထားတဲ့ပို့လိုမျိုးပဲပေါ့
ဟေသီ says: တဖြေးဖြေး လူတွေက လူစိတ်ပျောက်သွားကြတယ်။
aye.kk says: ရေဘေးဒုက္ခလည်းခံရ
Ma Ma says: ဟန်ချက်တစ်ခုပျက်သွားရင် အဲဒါကို ပြန်ထိန်းရင် ကျန်တဲ့ဟန်ချက်တွေလဲ အနည်းနဲ့အများဆိုသလို လွဲကုန်ကြရတယ်။
ကိုယ့်အလှူ အကျိုးရှိအောင်ယုံကြည်စိတ်ချရတာကို ရွေးလှူပေ့ါ။ စီးပွားရေးလုပ်နေသူတွေအနေနဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ခ၊ ကုန်ပစ္စည်းရှားပါးမှု အဲဒါတွေပေါ်လိုက်ပြီး ရေမြင့်ကြာမြင့်ဆို ကုန်ဈေးနှုံးတက်ရောင်းရတာတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
Foolish Girl says: Business is Business
လုံမလေးမွန်မွန် says: ကိုယ်ချင်းစာစိတ်တွေ ပျောက်ကုန်ကြတယ်.. သင့် မသင့် . အကောင်းအဆိုး ခွဲခြားနိုင်တဲ့ အသိဥာဏ်တွေ သေဆုံးကုန်ကြတယ်… ကိုယ့်တစ်ဝမ်းအတွက် သားကိုချနင်းသူတွေ များလာတယ်.. စနစ်ကြောင့် အရာအားလုံး ပျောက်ကွယ်ခဲ့တယ်…